Pakuverenga kukura pezvikwiriso vane muhombe mumatanho
Kukarukureta pezvikwiriso ane pivoting Nhanho 90°
mufanidzo Dzose 1: 12345678910
Upamhi masitepisi Z
Kuwanda kwenhambwe zvachose C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Nhamba muhombe mumatanho C2 234567891011121314151617181920
Kuwanda ezasi siyana C1 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Pakukora nhanho W
Pakukora of bowstring T
ratidza risers H
The maitiro kukarukureta emapuranga masitepisi
Kupinda zvaida encombrements
Z - Upamhi masitepisi
W - Pakukora nhanho
C - kuwanda kwenhambwe
C1 - kuwanda kwenhambwe kuderedza kutevedzana
C2 - Nhamba muhombe mumatanho
Kukarukureta pezvikwiriso ane pivoting tsoka 90°.
Wooden masitepisi vane muhombe muzvikamu yekudyidzana zvechokwadi anogona kuponesa nzvimbo mumba pasina kurasikirwa nyore uye functionality.
Apo pakuverenga Fungisisa kuti Zvakanyanya Kunaka Panguva nhamba muhombe nzendo. In ruzivo wangu Zvakanyanya Kunaka Panguva 3-padanho pamwe masitepisi yakafara masendimita 80. More - matanho uchakomborerwawo yakamanikana uye kugadzikana.
Kana pakakoromoka rinongova pamusoro pezvikwiriso, ndiko kukwirira kukosha panzvimbo majana kuti bindepinde, kudzivisa kukuvara mumusoro. Zvinofanira kuva zvinenge 2 mamita.
With mamiriro ichi, manera upamhi inoita basa rinokosha. Sezvo zvakananga kubatsira kudekara wekushanduka matanho. The upamhi hwazvo pamatanho - zvikuru kuwanda kwenhambwe anogona kushandiswa pasina kurasikirwa zvimunakire.
Nokuda kusiyana muzvirongwa uye zvivako, handrails nokuti masitepisi vari chirongwa yaisagona akaverenga uye vakaratidza.
kosha! Nyatsoteerera kukura wekushanduka matanho. Kuti tiwane kukura pachikuva - musakanganwa kuwedzera kuti kukura protrusion uwandu.
Kukarukureta pamusoro ibwe masitepisi haana akasiyana dzemaitirwe matanda kana simbi masitepisi. Chinhu chikuru - kuverenga kukura mumatanho. kukwirira yavo kunodiwa kuti zvakafanana zvikamu zvose.
Kukarukureta zvimunakire masitepisi rinowanikwa achishandisa nzira inobva nokureba danho.
Human nenamo urefu anoda kubva 60 kusvika 66 cm Paavhareji - 63 cm.
Hwomutambarakede manera rinoenderana nzira: 2 danho kukwirira + Danho udzamu = 63±3 cm.
The zvikuru yokuita zvinodiwa manera - kubva° 30 kusvika 40°.
Depth manera matanho anofanira kusangana kukura 45 shangu - hapana asingasviki 28-30 cm.
Kushaikwa udzamu anogona nekure fungidziro danho.
Danho kukwirira vanofanira kuva 20-25 cm.
Chirongwa achaswedera ari nepurani yakadhirowewa papepa masitepisi vane muhombe zvokukura pamwe huru pamakona uye miganhu.
Mune mifananidzo inoratidza zvinonakisa miganhu pezvikwiriso, zvichiratidza kumusoro matanho pamusoro tambo, makona matanho uye zvinokosha kukura matanho pachavo.
Ndinovimba Chirongwa kuchakubatsira kugadzira uye kuvaka manera kupupura kana kumba nemaoko avo.